Zvekare zvakare isu tinoshuma pane chishandiso chinowanikwa kurodha pasi zvachose mahara. Ino nguva tinotaura nezve mutambo Splot, mutambo une mutengo wenguva dzose we0,99 euros, asi unowanikwa kurodha kwenguva pfupi. Muchinyorwa changu chakapfuura, ndakakuzivisa nezve Forvo Pronunciation application, chishandiso chinotibvumidza kuti tivandudze kududzwa kwemazwi mumitauro inopfuura mazana matatu nemakumi matatu nemashanu. Chishandiso ichi chichatibvumidza kutibatsira kuvandudza mataurirwo emazwi iwawo atinogara tichidzipwa uye kuti hapana nzira yekudzidza kududza.
Splot mutambo unonakidza wepuratifomu uko protagonist ari mutorwa mudiki akaita kumhara kwechimbichimbi pane imwe nyika isinganzwisisike, kwaachatanga basa rekununura huwandu hweVana Vacheche kubva mukutyisidzira kunotyisa kunoitwa neveHungry Masses neMass Kings.
Splot mutambo wakasarudzika uyo unotibvumidza kuti tinakirwe munguva yedu yekusasarudzika mutambo unonakidza watinofanira kuunganidza nhiyo isu tichidzingirirwa neVane nzara Masses kuburikidza nematanho makumi mashanu nenomwe mu56 nyika dzakasiyana.
1 Splot Zvimiro
2 Splot ruzivo
Kugadziriswa kwekupedzisira: 21-12-2014
Compatibility: Inoda iOS 6.1.3 kana gare gare. Inoenderana ne iPhone, iPad uye iPod touch.